Uchungechunge oluthi "Clone", okuyinto premiered-TV Russian senzeka ngo-2004, futhi usabambelele idumela layo futhi uhlala cishe yisakhiwo sodumo kakhulu iphrojekthi Brazilian. Ukuze uchungechunge 250 ukhonkolo we ababukeli telenovela wayebe umkhaya, futhi isiphetho izinhlamvu bathola owabo. Ake sifunde indlela ukubheka futhi ngifuna abadlali "Clone" khona-ke namanje.
Giovanna Antonelli kudlalwa Jade enhle, onhliziyo yakhe ihlushwa isidingo sokuba akhethe phakathi uthando kanye namasiko Muslim. Ngo wokuphila, Antonelli kakhulu wayebuye eningi esonta kanye ematfuba. Phakathi ukuqopha yochungechunge phakathi Giovanna futhi Murilo Benicio (Lucas) wazalelwa umuzwa. Lezi abadlali "Clone" khona-ke futhi manje atehlukaniseki, ngoba lo mbhangqwana kwadingeka indodana ezivamile, Pietro. Abalandeli ngename. Kwakubonakala sengathi kakhulu isiphetho ngalezi zinto izinkanyezi.
Sasihlala lapho esikhundleni nabalingisi eyinhloko "Clone" khona-ke futhi manje? Maye, Murilo futhi Giovanna baziswa ngokomthetho wabo ikhefu-up cishe ngokushesha ngemva kokuba baba abazali. Kulesi isipiliyoni ex-abathandi nabalandeli ukuyaluza imibhangqwana abagcini lapho. Kanye entsha okhethiweyo nendodana Giovanna Antonelli wakhulelwa ukuthuthela e-US, kodwa Benicio kwaba ngokunamandla ngokumelene isinqumo esinjalo, ngoba akazange ukuba ahlukane Pietro. Yaqala i wiggery okubuhlungu. Lokhu scandal ulilethele yokungezwani nomshado omusha Antonelli - 4 nje izinyanga wachoboza ekhuphuka kanye nomyeni wakhe.
Okwamanje, actress uye ekugcineni bathola umthombo umkhaya ujabule ethule ubuhlobo kanye nomqondisi Leonardo Nogueira. Ngo-2010, bazalelwa twins Yinhle Antonia futhi Sofia. Manje actress isivele engu-41 ubudala, kodwa yena ebukekayo zonke okufanayo. Antonelli uyaqhubeka avele ochungechungeni. telenovela Kugcine, lapho kudlala indima enkulu - Sol Nascente (2016).
Murilo Benicio noDebora Falabella
Murilo Benicio, ababedlala izinhlamvu ezintathu nje (Lucas romantic, beziphakamisa Diogo noLeo Clone), ekuphileni kwangempela, futhi, wayebhekene uchungechunge amanoveli kanye partings. Ubani nje nempela owayeke wacabanga ukuthi umlingisi uzoqala ukuhlangabezana uDebora Falabella, okuyinto esikrinini ukuthi indodakazi yakhe sengozini Mel. Kuyaxaka ngempela ukuthi ngakho kwasakazwa ochungechungeni TV "Clone" kanye nendima abadlali.
Khona-ke futhi manje actress uDebora Falabella egxilile indima ngokuphelele. Kufanele kuqashelwe ukuthi uDebora wanikezwa kanzima isikhathi isithombe Heroine "The Clone", abaphethwe yizidakamizwa. Lo mlingisi is ngakho benamandla nomgomo, ukuthi esikhathini esithile, abanye baze baya esibhedlela ngenxa ukucindezeleka futhi ngaba nokucindezeleka esindayo.
Ngo-2012, kwesizini yochungechunge entsha "Avenida Brasil" lapho abadlali wadlala futhi "Clone". Khona-ke futhi manje Murilo noDebora benikana uzwela, kodwa manje babewubona nomunye ubuso obusha. romance waqala phakathi izinkanyezi TV. Basaqhubeka zihlala ndawonye, ukungaboni ukuphupha yokuba abazali. Ngaphezu esibukweni noDebora kukhanya enkundleni.
Dalton ISAP got indima Sayid, ozama ngobuqotho uwine uthando Jade. Eqinisweni, umlingisi - uhluke ngokuphelele ubuntu bakhe. Kuyinto soft ngisho indoda kancane namahloni. Into kuphela like Dalton futhi Wathi, kungcono ngamashwa somshado ukuthi ziwile ukuba isabelo sabo.
ngomshado wokuqala Vig sika akuzange kuhlale isikhathi eside, kodwa nengoduso yesibili Camilla Kserkes Dalton wakwazi simjabulisa ngempela. Ngo-2016 yena lwalumenza ajabule twins othandekayo. Manje umlingisi ukhetha ukuba uchithe isikhathi esengeziwe sokuba nomkhaya futhi ubuke izingane zakhe zikhule.
Daniela Escobar abadlale indima ezicashile, kodwa Maiz esikhohlisayo. Lo mlingisi iye emshadweni kumqondisi "Clone" Jaime Monzhardimom, wazala indodana. Nokho, ngemva kweminyaka engu-8 ebudlelwaneni bawo esibucayi, futhi lo mbhangqwana hlukana. In parallel inhlokomo ekuphileni kwakhe siqu Daniel waqala nobunzima empilweni okhokhelwayo.
Mhlawumbe isandla ukuqinisekisa ukuthi ukuba umdlali wayeka elwela nomunye ukunikela indima, usekwenze kunethonya owawushade naye. Nokho, Escobar futhi ayengasayi wazizwa intshiseko wangaphambili isusiwe. Ngonyaka ka-2010, waphinde washada, kodwa umshado wesibili yathatha kancane kakhulu kunezokuqala - izinyanga ezimbili. Ngokusobala, ukuba umdlali ethola ukuthi bekhululeke kakhudlwana ukuba khulula. Yena uhamba eziningi futhi ejabulela nakho ezintsha.
Vera Fischer (Yvette) - omunye wabantu evelele kunazo zonke, ababehlanganisa abadlali Brazilian TV ewuchungechunge "Clone". Khona-ke futhi manje elijabulela futhi inakekelwa kahle kakhulu, nakuba isikhathi namanje zashiya izibazi ku ubuhle bakhe libalele. Bambalwa abantu bazi ukuthi Fisher wayeshade Perry Salles. Bobabili ex-unkosikazi - nabalingisi we ifilimu "Clone". Zesikhathi Esidlule Nezanamuhla Vera Fisher asihlali ithunzi. Yena ekukhuliseni izingane ezimbili futhi lifinyelele ukuphumelela emsebenzini, futhi manje isivakashi njalo imibukiso ithelevishini nemicimbi yokuzijabulisa.
Carla Diaz futhi Stefani Britu
Kuyinto curious kakhulu ukwazi ukubukeka kanjani ephikisanayo omdala ingane abadlali yochungechunge "Clone" khona-ke namanje. Carla Diaz futhi Stefani Britu kudlalwa ezimbili hohotushek-nabazala - Khadija futhi Samir. Uyazibuza, ngibona indlela iye yakhula yabenza smiling intombazane yaphenduka ubuhle ekhexisayo. Bobabili madoda nizama ukuqhuba kuphela ukwakha isizinda kuleli bhizinisi yokwakheka nokulandelana uqhubeke sokudubula ochungechungeni. Stefani Brito futhi okwenzayo ukuze ugcine TV zezingane show.
Amantombazane nakuphela abayithandayo. Stephanie igama isoka kuyinto Igor, wayeyindodana ka abazali abadla izambane likapondo, futhi umfundi umthetho. By the way, Stephanie wayeseke washada ngaphambili kumdlali Alexandre Pato, kodwa umshado wabo yaphahlazeka. Carla Diaz akakamtholi olulodwa yayo.
Wonke umuntu uyakhumbula Leticia Sabatellu ngesimo a Latifa mnene futhi zenzisa. Ngesinye isikhathi ngo-actress wanamathela isihloko uphawu ubulili Brazilian, kodwa hhayi egxilile zothando iDemo nobunomoya, futhi kwaba umsekeli umshado.
Ngemva umshado wokuqala eside, ngeshwa, uphele ngesahlukaniso actress ashade ngo-2013 i-umlingisi Fernando Alves Pinto. Namanje luvele esibukweni e telenovelas, futhi njengokwabantu abadlala amabhayisikobho. Ngaphezu kwalokho Leticia udlala ethiyetha abuye abhale iculo.
Antonuli Kalloni ukudlalwa ku-screen unkosikazi Leticia Sabatelly - Mohammed Rashid. Ekusithekeni, yena Monogamous, kanye ubuntu bakhe. Lo mlingisi ukhona emshadweni obuqinile intatheli u-Ilse, futhi linikeza injongo ekuphileni Indodana yabashadikazi Pedro. Calloni ngendlela efanayo, likhishwa emisebenzini inkampani Globo. Ngaphezu kwalokho, umlingisi wathatha emsebenzini wokuziphilisa etemibhalo - uye benyathelisa izincwadi eziningana temibhalo yephrozi netindzaba kanye izinkondlo.
Marcella Novayes abadlale indima elula umfana Shandy, uthandana Mel, indodakazi abazali abadla izambane likapondo, eyadlalwa uDebora Falabella. Abalandeli zilinde ngaphandle endaweni Ukudutshulwa uzohlangana abadlali yochungechunge "Clone". Zesikhathi Esidlule Nezanamuhla Marcella Novayes awuzami hhayi ukuzama ukubeka ukuphila kwakhe siqu obala.
Amabili umshado wakhe behlukana kodwa Marcella igcinwe ubudlelwane obufudumele ex-Umkakhe, owazi wamnika amadodana amabili. Lo mlingisi uyaqhubeka ukuthola izimemo izindima ezintsha. Omunye imisebenzi yakhe yokugcina - ochungechungeni "Imithetho ye-Game". Novayes eveza isimo sawo yokudala, hhayi kuphela ngenxa movie, kodwa futhi umdlalo Os Impossiveis collective zomculo.
Cishe bonke abadlali "Clone" bese futhi sezifuna. Othile banquma ukuhlala kude udumo kuholela impilo elokuthula ukhululekile, kodwa kunoma zonke izinhlawulo abalandeli uzokhumbula edume insipho opera, abumbe ngokuncibilikisa a ISIFISO ukukhanya.
Elza Scarlet: Biography, izithombe. Zempi Elsa Scarlet futhi amagama abo
Le filimu ethusa kakhulu. documentary okunyanyisayo
"Levokarnil 500 mg" ( "Evalar"): ukubuyekezwa, yokusetshenziswa kanye nokusungulwa
Vaz 2102 - lokuqala Rounder
Indlela ukuvala zephrofayela "Instagram" ezihambini
Kuyini insimbi yomculo Hang?
Ikhekhe nge aluhlaza okwesibhakabhaka. A iresiphi nalelo ukunambitheka
Tracheitis: esithathelwanayo noma cha?
Itiye endlini Decoupage - wobuciko elincane kwamahora ambalwa
Ingabe ufuna ukufunda indlela ukudweba izithelo?
Catching bream ngo-September. ihlala. Tackle, lolo futhi ukuyengela.